ကမ္ဘာ့အထင်ရှားဆုံး ဓာတ်လှေကား ၁၀ စင်း – Gentleman Magazine
ကမ္ဘာ့အထင်ရှားဆုံး ဓာတ်လှေကား ၁၀ စင်း
လူသားတွေရဲ့ အင်ဂျင်နီယာပညာဟာ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းတဲ့ အဆင့်ကို ကျော်လွန်ခဲ့ပါပြီ။ ကမ္ဘာ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ အဆောက်အဦကြီးတွေ၊ အမှတ်တရနေရာတွေ မြို့တော်တွေ အဖြစ်နဲ့ ဗိသုကာပညာဟာ ကျန်ရစ်နေဆဲပါ။ လူသားတွေ ဒေါင်လိုက် အရှိန်အဟုန် မြင့်မြင့်နဲ့ တက်နိုင်ဆင်းနိုင်နေတာဟာလဲ အံ့ဩဖွယ်ကောင်းပါတယ်။ ကမ္ဘာ့အထင်ရှားဆုံး ဓာတ်လှေကားဆယ်စင်းအကြောင်းကို လေ့လာကြည့်ရအောင်။
၁၀. Elevador de Santa Justa
Lisbon က ပေါ်တူဂီနိုင်ငံရဲ့ အထိန်းအမှတ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Santa Justa မှာရှိတဲ့ Gothic ပုံစံ ၁၄၈ ပေမြင့်တဲ့ ဓာတ်လှေကားပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ရာစုနှစ်က စတင်တည်ဆောက်ခဲ့တုန်းကတော့ ရေနွေးငွေ့နဲ့ ဖြစ်ပြီး အခုတော့ လျှပ်စစ်နဲ့ မောင်းနှင်နေပါပြီ။ အင်ဂျင်ကို ပြောင်းလဲလိုက်ပေမယ့် သူ့ရဲ့ မူလ ငှက်လှောင်ချိုင့်ပုံစံ ဓာတ်လှေကားတွဲတွေနဲ့ သစ်သားနဲ့ အတွင်းကို အလှဆင်ထားမှုတွေဟာ ကမ္ဘာ့အထင်ရှားဆုံး ဓာတ်လှေကားစာရင်းထဲမှာ ပါဝင်စေတာပါ။
၉. The Ericsson Globe – SkyView
ဆွီဒင်နိုင်ငံ Stockholm က ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး စက်လုံးခြမ်းပုံ အဆောက်အဦဖြစ်တဲ့ Ericsson Globe ဟာ အမြင့် ၂၇၉ ပေ ရှိပြီး အချင်း ၃၆၁ ပေ ရှိပါတယ်။ မှန်ခန်းဓာတ်လှေကားတွေ အပြင်ဖက်မှာ ရှိပြီး အောက်ကနေ စက်လုံးအပေါ်ထိ မိနစ် ၂၀ ကြာ စီးနင်းရပါတယ်။
၈. Hammetschwand Lift
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ Bürgenstock က Hammerschwand ဓာတ်လှေကားဟာ ဥရောပရဲ့ အမြင့်ဆုံး ပြင်ပဓာတ်လှေကားဖြစ်ပြီး Burgenstock plateau နဲ့ Swiss Alps တောင်တန်းတို့ ရဲ့ မြင်ကွင်းကောင်းကို မြင်ရတဲ့ ကျောက်စွန်းတစ်ခုကို ပို့ပေးပါတယ်။ ဓာတ်လှေကားဟာ တောင်ထွတ်ရဲ့ ညာဘက်က ကျောက်စွန်းကို တစ်မိနစ်အတွင်း ပို့ပေးပါတယ်။
၇. Sky Tower
နယူးဇီလန် Auckland က Sky Tower က မိုးပေါ်ကို ပေ ၆၁၀ ထောင်ထွက်နေတဲ့ လေ့လာရေးတာဝါတစ်ခုပါ။ တာဝါထိပ်က မြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်းဟာ အရမ်းရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းအောင် လှပပါတယ်။ လာလည်သူတွေက ရင်တုန်စရာကောင်းတဲ့ မှန်ဓာတ်လှေကားကို စီးပြီး စက္ကန့်လေးဆယ်လောက်ကြာအောင် တက်ရမှာပါ။
၆. Gateway Arch Tram
St. Louis, Missouri က ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး Arch ဖြစ်တဲ့ Gateway Arch ဟာ ပေ ၆၃၀ မြင့်ပါတယ်။ စတီးနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ဒီ အမှတ်တရ အဆောက်အဦ ခြေတစ်ဖက်စီမှာ ဓာတ်လှေကား ရထားလေး တစ်စင်းစီ ရှိပါတယ်။ ရထားတစ်စင်းမှာ ဘဲဥပုံ တွဲ ရှစ်တွဲပါပြီး တစ်တွဲကို ခုံငါးလုံး ပါပါတယ်။ ဒီ Arch ရဲ့ ထိပ်ကို ရောက်ဖို့ လေးမိနစ်အချိန်ယူရပါတယ်။ ၁၀ မိနစ်တိုင်းမှာ ရထားတစ်စင်းထွက်ပါတယ်။
၅. Eiffel Tower
ပြင်သစ်ပြည် Paris ရဲ့ Eiffel Tower ကိုတော့ လူတိုင်းသိကြမှာပါ။ တာဝါထိပ်ကိုရောက်ဖို့ ဓာတ်လှေကားနှစ်ဆင့် စီးရပါတယ်။ မြေပြင်မှ ပထမထပ်ကို တစ်ဆင့်၊ ပထမထပ်ကနေ တာဝါထိပ်ကို တစ်ဆင့် စီးရတာပါ။
၄. Bailong Elevator
တရုတ်နိုင်ငံ Zhangjiajie က Bailong Elevator ဟာ ပေ ၁၀၇၀ မြင့်တဲ့ တောင်စောင်းတစ်ခုကို တက်ဖို့ဆောက်လုပ်ထားပါတယ်။ တောင်စောင်းထိပ်မှာ ပေ ၂၆၀၀ လောက်ထိမြင့်တဲ့ သဲကျောက်တောင်တိုင်တွေ အပါအဝင် ပါတ်ဝန်းကျင်ရှုခင်းကောင်းကောင်း မြင်ရပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ အထင်ရှားဆုံး ဓာတ်လှေကားတွေထဲက တစ်ခုပါ။
၃. CN Tower
Canada, Toronto က CN Tower က ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံး တာဝါ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ဓာတ်လှေကားက မှန်ကာဖြစ်ပြီး ရှုခင်းကြည့် ပလက်ဖောင်းကို တစ်မိနစ်အတွင်း အရောက်ပို့ပေးပါတယ်။ အဲဒီနေရာကနေ နောက်ထပ် ၃၃ ထပ် ဆက်တက်နိုင်ပါသေးတယ်။ အကောင်းဆုံး ရှုခင်းကြည့်ရဖို့ကတော့ Sky pod ကိုသွားဖို့ လက်မှတ်ဝယ်ရမှာပါ။
၂. Taipei 101
ကမ္ဘာ့လူသိများဆုံး အဆောက်အဦထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Taipei 101 ဟာ Taiwan မှာ တည်ရှိပြီး ၁၆၆၇ ပေမြင့်ကာ ဆင်းတက်သွားလာဖို့ ဓာတ်လှေကား ၆၇ ခုရှိပါတယ်။ အဲဒိထဲက နှစ်ခုကတော့ ၈၉ ထပ်က ရှုခင်းကြည့်နေရာကို ပို့ပေးပါတယ်။ ဒီ ဓာတ်လှေကားတွေဟာ တစ်စက္ကန့်ကို ၅၅.၂၂ ပေ အရှိန်ရှိပြီး ဒုံးပျံတစ်စင်း စီးနေရသလို ခံစားမှုမျိုး ပေးနိုင်မှာပါ။
၁. Burj Khalifa Elevators
၂၇၂၃ ပေ မြင့်တဲ့ Burj Khalifa ဟာ ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံး အဆောက်အဦဖြစ်ပြီး သူ့ဓာတ်လှေကားတွေကလဲ ကမ္ဘာ့အမြန်ဆုံးထဲမှာ ပါပါတယ်။ တစ်နာရီကို မိုင်လေးဆယ်နှုန်း ရှိပြီး အဆောက်အဦထိပ်ကို ၃၅ စက္ကန့်နဲ့ အရောက်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီ နှစ်ထပ် ဓာတ်လှေကားတွေဟာ ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးတွေ ဖြစ်ပြီး ၁၆၅၄ ပေနဲ့ ကမ္ဘာ့ အကွာအဝေးအများဆုံးလဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဓာတ်လှေကားတွေဟာ အမြင့်ဆုံးတွေမဟုတ်ပေမယ့် သူတို့တွေဟာ အံ့ချီးစရာအဆောက်အအုံတွေမှာ တပ်ဆင်ထားပြီး အရှိန် မြန်ကာ အကောင်းဆုံးရှုခင်းတွေကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ အထင်ရှားဆုံး ဓာတ်လှေကားတွေပါပဲ။
ကမ်ဘာ့အထငျရှားဆုံး ဓာတျလှကေား ၁၀ စငျး
လူသားတှရေဲ့ အငျဂငျြနီယာပညာဟာ ရငျသပျရှုမောဖှယျကောငျးတဲ့ အဆငျ့ကို ကြျောလှနျခဲ့ပါပွီ။ ကမ်ဘာ့မကျြနှာပွငျပျေါမှာ အဆောကျအဦကွီးတှေ၊ အမှတျတရနရောတှေ မွို့တျောတှေ အဖွဈနဲ့ ဗိသုကာပညာဟာ ကနျြရဈနဆေဲပါ။ လူသားတှေ ဒေါငျလိုကျ အရှိနျအဟုနျ မွငျ့မွငျ့နဲ့ တကျနိုငျဆငျးနိုငျနတောဟာလဲ အံ့ဩဖှယျကောငျးပါတယျ။ ကမ်ဘာ့အထငျရှားဆုံး ဓာတျလှကေားဆယျစငျးအကွောငျးကို လလေ့ာကွညျ့ရအောငျ။
Lisbon က ပျေါတူဂီနိုငျငံရဲ့ အထိနျးအမှတျတဈခုဖွဈတဲ့ Santa Justa မှာရှိတဲ့ Gothic ပုံစံ ၁၄၈ ပမွေငျ့တဲ့ ဓာတျလှကေားပါ။ လှနျခဲ့တဲ့ရာစုနှဈက စတငျတညျဆောကျခဲ့တုနျးကတော့ ရနှေေးငှနေဲ့ ဖွဈပွီး အခုတော့ လြှပျစဈနဲ့ မောငျးနှငျနပေါပွီ။ အငျဂငျြကို ပွောငျးလဲလိုကျပမေယျ့ သူ့ရဲ့ မူလ ငှကျလှောငျခြိုငျ့ပုံစံ ဓာတျလှကေားတှဲတှနေဲ့ သဈသားနဲ့ အတှငျးကို အလှဆငျထားမှုတှဟော ကမ်ဘာ့အထငျရှားဆုံး ဓာတျလှကေားစာရငျးထဲမှာ ပါဝငျစတောပါ။
ဆှီဒငျနိုငျငံ Stockholm က ကမ်ဘာ့အကွီးဆုံး စကျလုံးခွမျးပုံ အဆောကျအဦဖွဈတဲ့ Ericsson Globe ဟာ အမွငျ့ ၂၇၉ ပေ ရှိပွီး အခငျြး ၃၆၁ ပေ ရှိပါတယျ။ မှနျခနျးဓာတျလှကေားတှေ အပွငျဖကျမှာ ရှိပွီး အောကျကနေ စကျလုံးအပျေါထိ မိနဈ ၂၀ ကွာ စီးနငျးရပါတယျ။
ဆှဈဇာလနျနိုငျငံ Bürgenstock က Hammerschwand ဓာတျလှကေားဟာ ဥရောပရဲ့ အမွငျ့ဆုံး ပွငျပဓာတျလှကေားဖွဈပွီး Burgenstock plateau နဲ့ Swiss Alps တောငျတနျးတို့ ရဲ့ မွငျကှငျးကောငျးကို မွငျရတဲ့ ကြောကျစှနျးတဈခုကို ပို့ပေးပါတယျ။ ဓာတျလှကေားဟာ တောငျထှတျရဲ့ ညာဘကျက ကြောကျစှနျးကို တဈမိနဈအတှငျး ပို့ပေးပါတယျ။
နယူးဇီလနျ Auckland က Sky Tower က မိုးပျေါကို ပေ ၆၁၀ ထောငျထှကျနတေဲ့ လလေ့ာရေးတာဝါတဈခုပါ။ တာဝါထိပျက မွငျရတဲ့ မွငျကှငျးဟာ အရမျးရငျသပျရှုမောဖှယျကောငျးအောငျ လှပပါတယျ။ လာလညျသူတှကေ ရငျတုနျစရာကောငျးတဲ့ မှနျဓာတျလှကေားကို စီးပွီး စက်ကနျ့လေးဆယျလောကျကွာအောငျ တကျရမှာပါ။
St. Louis, Missouri က ကမ်ဘာ့အကွီးဆုံး Arch ဖွဈတဲ့ Gateway Arch ဟာ ပေ ၆၃၀ မွငျ့ပါတယျ။ စတီးနဲ့ လုပျထားတဲ့ ဒီ အမှတျတရ အဆောကျအဦ ခွတေဈဖကျစီမှာ ဓာတျလှကေား ရထားလေး တဈစငျးစီ ရှိပါတယျ။ ရထားတဈစငျးမှာ ဘဲဥပုံ တှဲ ရှဈတှဲပါပွီး တဈတှဲကို ခုံငါးလုံး ပါပါတယျ။ ဒီ Arch ရဲ့ ထိပျကို ရောကျဖို့ လေးမိနဈအခြိနျယူရပါတယျ။ ၁၀ မိနဈတိုငျးမှာ ရထားတဈစငျးထှကျပါတယျ။
ပွငျသဈပွညျ Paris ရဲ့ Eiffel Tower ကိုတော့ လူတိုငျးသိကွမှာပါ။ တာဝါထိပျကိုရောကျဖို့ ဓာတျလှကေားနှဈဆငျ့ စီးရပါတယျ။ မွပွေငျမှ ပထမထပျကို တဈဆငျ့၊ ပထမထပျကနေ တာဝါထိပျကို တဈဆငျ့ စီးရတာပါ။
တရုတျနိုငျငံ Zhangjiajie က Bailong Elevator ဟာ ပေ ၁၀၇၀ မွငျ့တဲ့ တောငျစောငျးတဈခုကို တကျဖို့ဆောကျလုပျထားပါတယျ။ တောငျစောငျးထိပျမှာ ပေ ၂၆၀၀ လောကျထိမွငျ့တဲ့ သဲကြောကျတောငျတိုငျတှေ အပါအဝငျ ပါတျဝနျးကငျြရှုခငျးကောငျးကောငျး မွငျရပါတယျ။ ကမ်ဘာ့ အထငျရှားဆုံး ဓာတျလှကေားတှထေဲက တဈခုပါ။
Canada, Toronto က CN Tower က ကမ်ဘာ့အမွငျ့ဆုံး တာဝါ ဖွဈပါတယျ။ သူ့ရဲ့ ဓာတျလှကေားက မှနျကာဖွဈပွီး ရှုခငျးကွညျ့ ပလကျဖောငျးကို တဈမိနဈအတှငျး အရောကျပို့ပေးပါတယျ။ အဲဒီနရောကနေ နောကျထပျ ၃၃ ထပျ ဆကျတကျနိုငျပါသေးတယျ။ အကောငျးဆုံး ရှုခငျးကွညျ့ရဖို့ကတော့ Sky pod ကိုသှားဖို့ လကျမှတျဝယျရမှာပါ။
ကမ်ဘာ့လူသိမြားဆုံး အဆောကျအဦထဲက တဈခုဖွဈတဲ့ Taipei 101 ဟာ Taiwan မှာ တညျရှိပွီး ၁၆၆၇ ပမွေငျ့ကာ ဆငျးတကျသှားလာဖို့ ဓာတျလှကေား ၆၇ ခုရှိပါတယျ။ အဲဒိထဲက နှဈခုကတော့ ၈၉ ထပျက ရှုခငျးကွညျ့နရောကို ပို့ပေးပါတယျ။ ဒီ ဓာတျလှကေားတှဟော တဈစက်ကနျ့ကို ၅၅.၂၂ ပေ အရှိနျရှိပွီး ဒုံးပြံတဈစငျး စီးနရေသလို ခံစားမှုမြိုး ပေးနိုငျမှာပါ။
၂၇၂၃ ပေ မွငျ့တဲ့ Burj Khalifa ဟာ ကမ်ဘာ့အမွငျ့ဆုံး အဆောကျအဦဖွဈပွီး သူ့ဓာတျလှကေားတှကေလဲ ကမ်ဘာ့အမွနျဆုံးထဲမှာ ပါပါတယျ။ တဈနာရီကို မိုငျလေးဆယျနှုနျး ရှိပွီး အဆောကျအဦထိပျကို ၃၅ စက်ကနျ့နဲ့ အရောကျပို့ပေးနိုငျပါတယျ။ ဒီ နှဈထပျ ဓာတျလှကေားတှဟော ကမ်ဘာ့အမွငျ့ဆုံးတှေ ဖွဈပွီး ၁၆၅၄ ပနေဲ့ ကမ်ဘာ့ အကှာအဝေးအမြားဆုံးလဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒီဓာတျလှကေားတှဟော အမွငျ့ဆုံးတှမေဟုတျပမေယျ့ သူတို့တှဟော အံ့ခြီးစရာအဆောကျအအုံတှမှော တပျဆငျထားပွီး အရှိနျ မွနျကာ အကောငျးဆုံးရှုခငျးတှကေို ပေးစှမျးနိုငျပါတယျ။ ကမ်ဘာ့ အထငျရှားဆုံး ဓာတျလှကေားတှပေါပဲ။
Previous: ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပျက်စီးချအစား ဆုံး နိုင်ငံ ၁၀ ခု
Next: ကမ္ဘာကြီး နောက် ၁၀နှစ်ကြာရင် ဘာတွေ ဖြစ်သွားမလဲ